AmberCoin စျေး - အွန်လိုင်း AMBER ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို AmberCoin (AMBER)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ AmberCoin (AMBER) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ AmberCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $160 860.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ AmberCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
AmberCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
AmberCoinAMBER သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00888AmberCoinAMBER သို့ ယူရိုEUR€0.00753AmberCoinAMBER သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0068AmberCoinAMBER သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0081AmberCoinAMBER သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0801AmberCoinAMBER သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0561AmberCoinAMBER သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.198AmberCoinAMBER သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0332AmberCoinAMBER သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0119AmberCoinAMBER သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0124AmberCoinAMBER သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.199AmberCoinAMBER သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0688AmberCoinAMBER သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0483AmberCoinAMBER သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.666AmberCoinAMBER သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.5AmberCoinAMBER သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0122AmberCoinAMBER သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0134AmberCoinAMBER သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.277AmberCoinAMBER သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0618AmberCoinAMBER သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.94AmberCoinAMBER သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩10.56AmberCoinAMBER သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.43AmberCoinAMBER သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.654AmberCoinAMBER သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.246
AmberCoinAMBER သို့ BitcoinBTC0.0000008 AmberCoinAMBER သို့ EthereumETH0.00002 AmberCoinAMBER သို့ LitecoinLTC0.000154 AmberCoinAMBER သို့ DigitalCashDASH0.00009 AmberCoinAMBER သို့ MoneroXMR0.00009 AmberCoinAMBER သို့ NxtNXT0.622 AmberCoinAMBER သို့ Ethereum ClassicETC0.00128 AmberCoinAMBER သို့ DogecoinDOGE2.62 AmberCoinAMBER သို့ ZCashZEC0.00009 AmberCoinAMBER သို့ BitsharesBTS0.342 AmberCoinAMBER သို့ DigiByteDGB0.305 AmberCoinAMBER သို့ RippleXRP0.0301 AmberCoinAMBER သို့ BitcoinDarkBTCD0.000303 AmberCoinAMBER သို့ PeerCoinPPC0.0296 AmberCoinAMBER သို့ CraigsCoinCRAIG4 AmberCoinAMBER သို့ BitstakeXBS0.374 AmberCoinAMBER သို့ PayCoinXPY0.153 AmberCoinAMBER သို့ ProsperCoinPRC1.1 AmberCoinAMBER သို့ YbCoinYBC0.000005 AmberCoinAMBER သို့ DarkKushDANK2.81 AmberCoinAMBER သို့ GiveCoinGIVE19 AmberCoinAMBER သို့ KoboCoinKOBO1.97 AmberCoinAMBER သို့ DarkTokenDT0.00818 AmberCoinAMBER သို့ CETUS CoinCETI25.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 05:40:02 +0000.